Dad U Dashay Maraykanka Oo Cunsuriyad Darteed Ugasoo Cararay - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaDad U Dashay Maraykanka Oo Cunsuriyad Darteed Ugasoo Cararay
Ghana (JigjigaOnline) – Waxa uu wacad ku maray inuu Mareykanka isaga tagayo kaddib markii uu dhibane u noqday wax uu rumaysan yahay inay salka ku haystay cunsuriyad ay kula kaceen askar boolis ah, ayuu ninkan Afrikaan Ameerikaanka ah ee Obadele Kambon waxa uu Ghana u guuray 2008 markaa kaddibna dib muusan eegin.
Mr Kambon ayaa haatan waxa uu nolol wanaagsan ka abuurtay goob mar udub dhexaad u ahaan jirtay ganacsiga adoonsiga, haatanna xorriyad ayuu ku raaxaysanayaa uu leeyahay waxaa la iigu diiday Mareykanka oo uu ku dhashay.
Waxa uu leeyahay wax dareen ah oo ku taagan ma uu jiro, oo kama uu walwalsana in boolis ay garba duuraan ama ay wiilkiisa dilaan. Arrintaas ayaa waxa ay ku dhacday wiil 12 jir ahaa oo lagu toogtay fagaaraha Cleveland ee Ohio 2014-kii markaas oo uu canugu ku ciyaariyay qori caag laga sameeyay kaas oo boolisku uu sheegay in uu qorigu ahaa mid rasmi ah.
‘Si khalad ah loo xiray’
Dhimashada wiilkaasi yar ayaa waxa ay horseedday inay Cleveland ka dhacaan dibadbaxyo udub dhexaad u noqday dhaqdhaqaaqa Madowguba Nafbay Leeyihiin.
Mr Kambon ayaa sheegay in noloshiisa ay isbadashay 2007-dii. Waxaa lagu xiray oo lagu maxkamadeeyay magaalada Chicago halkaas oo uu ku noolaa, kaddib markii askar boolis ah ay ku eedeeyeen inuu gaariga ku watay hub badan oo uu doonayay inuu toogasho ku gaysto.
Dhab ahaantii waxa uu watay qori aan cabbaysnayn oo wato warqaddii ogolaanshaha oo ugu jiray qeybta dambe ee gaarigiisa.
Mr Kambon ayaa waxa uu xasuustaa inuu aad uga argagaxay eedaha loo soo jeediyay markii maxkamadda la geeyay markaas oo uu wacad ku maray: “Waa haddaan mar dambe naftayda u ogolaado inaan soo hor fariisto maxkamadda askarta caddaanka ah ee uu musuqmaasuqu dilooday iyo xaakim qoyskayga, xaaskeyga iyo carruurteyda iga fogaynaya.”
Mr Kambon – oo ahaa aqoonyahan da’yar oo wax ka dhigi jiray iskuullada iyo jaamacadaha ku yaal aagga Chicago – ayaa ugu dambayntii eedahaasi laga bari-yeelay. Markaa kaddib ayaa waxa uu kaydsaday $30,000, sanadkii xigayna waxa uuna u guuray caasimadda Ghana ee Accra.
Waxa ay hore isu raaceen xaaskiisa Kala, lamahaanna haatan waxa ay haystaan saddex carruur ah – Ama, Kwaku and Akosua.
In la quusiyo ruuxda Afrikaanka
Mr Kambon ayaa waxbarashada sare ee heerka saddexaad ee luuqadaha waxa uu Ghana ka bilaabay 2009 haatanna waxa uu wax ka dhigaa mac-hadka jaamacaddaas ee Daraasaadka Afrika.
Tan iyo markii uu Ghana u soo guuray, waxa uu ogaaday inuusan dhibanne u ahayn midam sooc iyo dhibaato ku salaysan cunsuriyad.
Waxa uu sheegayaa in saaxiibkii uu sidaas oo kale dareemay markii uu soo guuray, waxa uuna ku kaftamay: “Hayaay, noloshani waa qaabka uu qof caddaan ah ku dareemayo gudaha Mareykanka, kaas oo ay u suuragashay inuu noolaado isagoo aanan ka walwalayn inay wax ku dhacaan.”
Mr Kambon ayaa qiray in wax walba aanay ahayn kuwa hagaagsan gudaha Ghana.
Waxa uu aad ula yaabay markii uu ogaaday in carruurta ku nool dhisme uu afar qoys oo kale uu kula noolaa aanay ku hadli karin luuqad ka mid ah kuwa Afrika.
Olole ka dhan ah Gandhi
Sidoo kale waxa uu iskudayay inuu wax ka badelo taariikhdii uu gumaystihii ka tegay.
2018-kii waxa uu ku guulaystay olole uu hogaamiyay oo ku qasbay Jaamacadda Ghana ee meesha laga saaro taallo loo dhisay hogaamiyihii gobanimada Hindiya gaarsiiyay ee Mahatma Gandhi.
Isagoo dul taagan asaaska faaruqa ah ayuu waxa uu xushmad u muujiyay Awoodda Dadka Madow oo waxa uu ku baaqay in la aqoonsado halyeeyada Afrika ee halka nin ka badan ee lagu xasuusto inay Koonfur Afrika kula dagaalameen caddaankii cunsuriyiinta ahaa – waxa uuna yiri Hindidu waxa ay isu arkayeen “inay ka sarreeyaan” dadka madow.
“Haddii aynaan nafteenna ixtiraamin oo aannu hoos u dhigno halyeeyadayada oo aannu kuwa kale oo aan ixtiraam noo hayn buunbuunino, markaas dhibaato ayaa jirto,” Mr Kambon ayaa BBC-da u sheegay.
Madaxweynaha Ghana Nana Akufo-Addo ayaa 2019-kii waxa uu ku dhawaaqay “Sanadkii soo laabashada”, isagoo sheegay in ay tahay mas’uuliyadda dalka in “la soo dhaweeyo” Afrikaanka qoysaskooda lagu qasbay adoonsiga.
2016-kii Mr Kambon – iyo 33 kale oo Afrikaan ah oo qurbajoog ah – ayuu madaxweyne John Mahama ku baaqay in dhalasho la siiyo.
Arrintaas oo aheyd tallaabadii ugu dambaysay ee uu qaado kaddib markii loogaga guulaystay doorashadii la qabtay bishii Diseembar ee isla sanadkaasi, Mr Mahama ayaa awooddiisa madaxweynenimo waxa uu u adeegsaday inuu codsigaasi meelmariyo.
“Waxba idinma siinayo tani waa xaqiinna dhalashada, waxaan un dib idinkugu so celinayaa xaqiinnii,” ayuu xasuustaa Mr Kambon inuu ku yiri Mahama.
Waxa uu waalidkii uga mahadinayaa inay ku xiriiriyeen meeshii uu ka soo jeeday ee Afrika markii ay u bixiyeen magacan Obadele, ee macnaheeda Yoruba u dhiganta “boqorkii waa uu soo laabtay”.
2017-kii ayaa waxaa lagu caleema saaray Bariga dalka Ghana isagoo lagu sharfay jagada “Ban mu Kyidomhene”, oo ah jumlo Akan ah oo oronaysa “Taliyaha Ilaalada dambe”.
Kenya Oo Ku Eedaysay Somaliya Inay Ka Dambayso Qorshaha Djibouti Ugu Halgamayso Xubinnimada Golaha Ammaanka